PSJTV | प्रहरी, एम्बुलेन्सचालक र डाक्टरले समेत छुन नमान्दा २८ वर्षीया युवतीको दुखान्त
Thursday4June 2020 | बिहिबार, २२ जेठ २०७७
प्रहरी, एम्बुलेन्सचालक र डाक्टरले समेत छुन नमान्दा २८ वर्षीया युवतीको दुखान्त
मङ्गलबार, २५ चैत २०७६ पिएसजे न्युज
यो कथा हो सामाखुसीस्थित आशीर्वाद वृद्धाश्रममा आश्रय लिएकी सरस्वती भुजेलको। उनको उमेर २८ वर्ष मात्र, तर वृद्धाश्रममा कसरी पुगिन् ? कथा सुरु हुन्छ सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेबाट। नाम मात्र सरस्वती, तर उनले विद्यालय गएर ज्ञान लिन पाइनन् । किनकि घरमा ‘लक्ष्मी’कै अभाव थियो । १४ वर्षमै बिहे भयो, १५ वर्षमा उनी आमा भइन् । छोरी दुई वर्षकी हुँदा दोस्रो सन्तानको रूपमा छोराको जन्म भयो।
यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ। विपन्न परिवारकी छोरी उनी आफ्ना सन्तानलाई भने सुखी देख्न चाहन्थिन् । तर, श्रीमान् बेरोजगार थिए, घरको गुजारा चलाउन गाह्रो थियो । त्यसैले ऋण गरेर तीन वर्षअघि उनी वैदेशिक रोजगारीमा गइन्। कमाएको पैसा उनले श्रीमान्लाई पठाइरहिन् । गाउँको ऋण तिर्न भनिन्, छोराछोरीलाई दुईछाक मिठो खुवाउन भनिन् । पैसा बचत गर्न पनि श्रीमान्लाई अनुरोध गरिन्।
दुई वर्ष कुवेतमा पसिना बगाएर उनी स्वदेश आइन् । तर, श्रीमान्ले न ऋण तिरेका थिए, न बचत गरेका थिए । छोराछोरीले झन् दुःख पाएका थिए। यो विषयले घरमा बेमेल भयो । सरस्वतीले दुई लाख रुपैयाँ नगद लिएर आएकी थिइन् । तर, श्रीमान्सँग झगडा हुने र मिल्ने क्रम चलिरहँदा त्यो पैसा पनि सकियो।
एकातिर पैसा घट्दै गयो, अर्कोतिर श्रीमान्को यातना बढ्दै गयो । मदिरा खाएर श्रीमान्ले उनलाई बारम्बार कुट्न थाले । गत जेठमा त श्रीमान्ले यसरी कुटे, सरस्वती बेहोस भइन् । उनलाई अस्पताल लग्न छाडेर बाह्रबिसेको पात्लेसिंह जंगलमा फालेर श्रीमान् रमेश फरार भए।
रक्ताम्मे सरस्वतीलाई गाउँलेले देखे । माइतीलाई खबर भयो । उनलाई उद्धार गरेर धुलिखेल अस्पताल ल्याइयो । दिदी चमेलीले भनिन्, ‘हामीले त माया मारेका थियौँ, तर २०औं दिनमा उसको होस आयो । ऊ बाँची, किनकि उसले दुःख पाउन अझै बाँकी रहेछ।’
सरस्वतीको होस फर्कियो, तर मस्तिष्कमा गम्भीर चोट लागेकाले उनको बोली फर्किएको थिएन । शरीर अशक्त थियो । गाउँ फर्किएर गरिखान सक्ने स्थिति थिएन । त्यसैले उनलाई काठमाडौंका आश्रममा राख्ने तयारी भयो । रिमाले आशीर्वाद वृद्धाश्रममा सम्पर्क गरिन् । आशीर्वादकी लीला गुरुङले सरस्वतीलाई आश्रय दिइन् ।
योबीचमा उनको बोली पनि बिस्तारै फर्कँदै थियो, त्यसैले उनले बाह्रबिसेदेखि कुवेतसम्मको इतिवृत्तान्त लीलालाई सुनाएकी थिइन्। ‘अब म ठीकै हुँदै छु, आफैँ गरिखाने हुन्छु, छोराछोरीलाई हुर्काउँछु । तर, मलाई जंगलमा फालेर हिँड्नेलाई जेल पठाएरै छाड्छु भन्ने अठोट उसले मलाई पटकपटक सुनाई,’ लीलाले भनिन्।
सरस्वती शारीरिक मात्र होइन, मानसिक रूपमा पनि बलियो हुँदै थिइन् । अघिल्लो सोमबार अपराह्न करिब ५ बजे आश्रमको माथिल्लो तलामा सबैले खाजा खाए । कसैको फोन आएको थियो, कुराकानी गर्दै उनी तल झरिन् । तर, त्यहीबीचमा बेहोस भइन् । लीला र उनकी सहयोगी नम्रताले सरस्वतीलाई पानी छम्किए, चिच्याएर बोलाए, तर अनेक गर्दा पनि उनको होस आएन।
लकडाउन भएकाले बाहिर यातायात बन्द थियो । आत्तिँदै उनीहरूले प्रहरीलाई फोन गरे । तर, पाँच मिनेटको दूरीबाट प्रहरी आइपुग्न एक घन्टा लगायो । प्रहरी देखेर लीलालाई केही ढाडस मिल्यो, लौ न सर गाडीमा हालौँ भन्दै उनले आग्रह गरिन्।
‘तर, प्रहरीले भन्यो, ‘गाडीमा राख्न मिल्दैन । कतिसम्म भने प्रहरी गेटबाट भित्र छिर्नसमेत मानेन । कोरोना होइन, अचानक बेहोस भएकी हो, टाउकोमा चोट थियो, त्यसैले होला भनेर हामीले सम्झाउन खोज्यौँ । तर, प्रहरीले गाडीमा राख्न मिल्दैन, घरभित्र छिर्न पनि मिल्दैन भनेर जिद्दी गरे,’ लीलाले भनिन्, ‘गाडीमा राख्न मिल्दैन, घरभित्र छिर्न पनि मिल्दैन भने प्रहरी किन आएको भनेर मैले सोधेँ, यसरी जीवनमरणको दोसाँधमा भएको मान्छेको महत्वपूर्ण समय उनीहरूले बर्बाद गरिदिए ।’ लीला र उनका सहयोगीले एम्बुलेन्सलाई फोन गरे । त्यसको करिब एक घन्टापछि एम्बुलेन्स आयो ।
उता सरस्वतीको मुटु चलिरहेको थियो, उनले सास फेरिरहेकी थिइन् । त्यसैले लीला र उनकी सहयोगीले माया मार्न सकेनन् । दुई महिलाले सकिनसकी उनलाई एम्बुलेन्समा राखे । प्रहरी र एम्बुलेन्सचालक पुरुषको समूह तमासे बनिरह्यो ।
अचेत सरस्वतीलाई बोकेर एम्बुलेन्स शिक्षण अस्पतालतर्फ अघि बढ्यो भने प्रहरी टोली सोह्रखुट्टे चौकीतिर । बेलुकी ८ बजे एम्बुलेन्स शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षको मूलढोकामा रोकियो । स्ट्रेचरमा राखेर बिरामीलाई बाहिर निकालियो । तर, भर्ना लिन अस्पताल तयार भएन।
त्यहीँ कोलाहल भयो । हारगुहारपछि एक चिकित्सक बाहिरै आए । त्यतिन्जेलसम्म सरस्वती अचेत भएको तीन घन्टा भइसकेको थियो । डाक्टरले बिरामीको घाँटी छामे । लगत्तै घोषणा गरे– बिरामीको मृत्यु भइसकेको छ । लीला र नम्रता स्तब्ध भए । एम्बुलेन्सले त अघि नै बाटो तताइसकेको थियो।
यसरी एक संघर्षशील महिलाको जीवन सकियो, तर उनको दुःख अझै सकिएको थिएन । अचानक मृत्यु भएकाले उनको पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने भयो । त्यसका लागि डाक्टरले ‘रिफर’ पनि गरिदिए । तर, शव पोस्टमार्टमस्थलसम्म लग्न कोही पनि तयार भएन।
कोरोना होइन, अचानक अचेत भएकी बिरामीको मृत्यु भएको हो भनेर दोहोर्‍याउँदा पनि उनीहरूले अस्पतालका कसैको पनि मन पगाल्न सकेनन् । बाध्य भएर महिलाहरूले नै शव लिएर पोस्टमार्टमस्थलमा छिरे । सरस्वतीलाई ‘फ्रिजर’मा राखेर उनीहरू आश्रम फर्किए ।
लकडाउनले भोकै परेपछि एक मजदुरद्वारा आत्महत्याको प्रयास
हिन्दू स्वयमसेवक संघ पनि राष्ट्रियताको पक्षमा अडिग
अन्तर्जातीय प्रेमविवाह गरेका दलित युवा बलात्कारको झुटा मुद्दामा दुई वर्षदेखि जेलमा
विदेशबाट आउने नेपालीको व्यवस्थापन सेनाले गर्ने
संक्रमित नागरिक भैंसी गोठमा, कर्णालीका सभामुखलाई भने पौने दुई करोडको गाडी
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता
२८ वर्ष अगाडि हायात होटेललाई दिइएको तीन सय चार रोपनी जग्गा फिर्ता लिने तयारी
कोरोना नियन्त्रण गर्न प्रदेश १ सरकार चन्दा उठाउँदै, तर मन्त्री कुसियतले किन्न थाले दुई करोड सात लाखको गाडी
चौतर्फी विरोधपछि सरकार पछि हट्यो, कर तिर्ने अवधि असार ७ सम्म थप
राष्ट्रपति र प्रचण्डबीच एकघन्टा भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापालाई किन लगेनन् जन्मघर तेह्रथुम?
13th Apr 2020 पिएसजे न्युज
कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व आक्रान्त भएको वेला छिमेकी मुलुक चीनसँग तातोपानी नाका सञ्चालनबारे नेपालका सरकारी अधिकारीले औपचारिक बैठक गर्ने तयारी गरेका छन् । नेपाल र चीन छुट्याउने लिपिङस्थित मितेरीपुको रातोरेखामा एक मिटर ...
31st May 2020 पिएसजे न्युज
काठमाडौं : आज बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश हुँदैछ । यसका लागि आज (आइतबार) बिहान ११ बजे बैठक बस्दै छ । संसद बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ...
6th Apr 2020 पिएसजे न्युज
एजेन्सी : पछिल्लो समय कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणबाट ग्रसित बनेको अमेरिकाको एक चिनियाखानामा रहेको एक बाघमा पनि कोरोना ‘पोजिटिभ’ पुष्टि भएको पाइएको छ । कोरोनाबाट अति प्रभावित अमेरिकी सहर न्यूयोर्कस्थित ब्रोन्स चिडियाखानामा ...